Lamaane xabsi ku muteystay dilka wiilkooda oo ay si kama ah isugu caddeeyeen. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Lamaane xabsi ku muteystay dilka wiilkooda oo ay si kama ah isugu...
Lamaane xabsi ku muteystay dilka wiilkooda oo ay si kama ah isugu caddeeyeen.
Loïc Vantal oo 28 jir ah ayaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah, arrintaa oo uu ku muteystay dilka wiilkaa yar oo lagu magacaabi jiray Tony oo xilligaasi saddex jir ahaa.
Waxaa markii dambe lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah oo ay ku muteysatay “inay ku qarisay tacaddiga loo geystay wiilkeeda
Previous articleGabar Soomaali ah oo ku geeriyootay xero qaxooti oo kutaala dalka Gariiga.
Next articleSoogalootiga oo kordha waxa ay horseedeysa dambiyo iyo dilal badan” Siv Jensen.